Accueil > Gazetin'ny nosy > andratana 2030: Mpanao pôlitika efa lo daholo no manohana azy
andratana 2030: Mpanao pôlitika efa lo daholo no manohana azy
Mihazakazaka mafy mankany amin’ny fifidianana miaraka amin’ilay hoe “Fisandratana 2030” ny filoha am-perinasa Hery Rajaonarimampianina sy ny antoko HVM (Hery Vaovao ho an’i Madagasikara). Tato anatin’ny herinandro maromaro izao, rehefa misy ny fitokanana fotodrafitrasa ataon’ny filohan’ny repoblika dia voaresaka hatrany ny “Fisandratana 2030”. Ny fomba fanaon’ny fitondrana moa tato ho ato, antsoina miakatra eny Iavoloha ny mpiasam-panjakana (chef Zap, chef Cisco, sns sns) sy ireo ben’ny tanàna avy any amin’ny Faritra, ary ambara avy eo fa vonona ny hanohana ny “Fisandratana 2030” ireo mpiasam-panjakana sy olom-boafidy miaka-dapa. Tamin’ny sabotsy teo koa no nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy fanatajahan-tena ny fijoroan’ilay vovonana pôlitika vaovao izay hiara-dia sy hanohana ny HVM amin’ny fifidianana, tsy inona izany fa ny “Rodoben’ny Fisandratana”. Niseho vahoaka nandritra ity hetsika natao tamin’ny sabotsy teo ity avokoa ireo mpanao pôlitika nisafidy ny hanohana an’i Hery Rajaonarimampianina. Amin’ny ankapobeny dia saika mpanao pôlitika efa lo daholo ireo mitsangana manohana ny “Fisandratana 2030”, na koa mpanao pôlitika efa kalaza amin’ny famadihana palitao. Raha jerena fotsiny ireo mivondrona ao anatin’ilay “Rodoben’ny fisandratana” nitsangana tamin’ny sabotsy teo, tsy misy na iray aza ny endrika vaovao fa olona efa saika lo daholo ary tsy manan-danja intsony eo amin’ny sehatra pôlitika eto amin’ny firenena. Lohalaharana tamin’izany ohatra ny filohan’ny vondrona pôlitika “les As”, Voninahitsy Jean Eugène, izay tafiditra ao anatin’ny sokajina mpanao politika antsoina hoe “dinosaure”. Tazana nijoro teo amin’ny lohalaharana ihany koa ny filoha lefitra ny HAT (Fahefana Avo ny Tetezamita) teo aloha, ramatoa Lanto Rakotomavo. Ity farany izay filoha nasionalin’ny ny antoko TGV teo aloha kanefa nivadika HVM tanteraka ankehitriny. Torak’izany koa ny minisi-panjakana misahana ny Fifandraisana amin’ireo andrim-panjakana tamin’ny andron’ny tetezamita, Yves Aimé Rakotoarison. Tsy misy tsy mahalala angamba fa mpikambana mahafatra-po tao amin’ny antoko TIM (Tiako i Madagasikara) ingahy Yves Aimé Rakotoarison saingy namadika palitao ka nitsipaka an’i Marc Ravalomanana rehefa nomena toerana tao anatin’ny governemantan’i Camille Vital, tamin’ny fitondran’i Andry Rajoelina.
Tsy resahina intsony moa ny minisitra ny Raharaham-bahiny teo aloha, Pierrot Rajaonarivelo, izay zara raha nahazo firy isan-jato tamin’ny fifidianana filoham-pirenena tamin’ny taona 2013. Ankoatra ireo efa goaik’antitra amin’ny fanaovana pôlitika dia saika mpamadika palitao sy jamban’ny “malette” daholo ihany koa ireo mitsangana manohana ny filoha am-perinasa, raha tsy hiresaka afa-tsy ireo solombavambahoaka notambazana vola 50 tapitrisa ariary vao nandany ilay lalàna fehizoro mifehy ny fifidianana. Ireo mpanao pôlitika goaik’antitra sy mpamadika palitao ireo no eritreretin’ny HVM hampandany azy ireo amin’ny fifidianana filoham-pirenena.